Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnya onye ọkachamara ahịa Amazon?
Ndị ahia n'ahịa ndị nwere ahụmahụ na azụmahịa azụmaahịa na-enwekarị nsogbu mgbe ha na-ebupụta ngwaahịa na Amazon. Dị ka ị maara, ozizi dị iche na omume ahụ. Ọ bụ ya mere ọ na-ejikarị enweghị ike ịmụ ihe omụma ahụ site na ntụziaka Amazon na ntụziaka. Ị chọrọ onye maara otú usoro ntanetị Amazon si arụ ọrụ mbụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịchọ ụlọ ọrụ ọkachamara.
Isi ihe mere ndị ahịa Amazon ji achọ ndị ahịa na-ere ahịa gụnyere:
ndị na-ere ahịa anaghị achọ ịhapụ ego ha na tebụl n'ihi obere pasent nke okporo ụzọ na-abịakwute ha ndepụta;
ndị ahịa anaghị enwe ọnụnọ na Amazon ma chọọ ịmepụta ngwaahịa ha n'aka ndị ahịa nwere ike ịnweta ya;
ma ọ bụrụ na ngwaahịa ndị dị na Amazon na-ere ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị resellers;
mgbe ndị ahịa na-achọpụta na ha anaghị arụ ọrụ yana ọ ga-abụ.
A ga - edozi nsogbu a niile. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa itinye oge na nyocha na nyochaa njirimara Amazon gị ugbu a. Mgbe ahụ, ịkwesịrị ịmepụta mgbasa ozi ahịa site na nke ọ bụla, na-emejupụta ọtụtụ ngwaọrụ na usoro nyocha kachasị mma. Ọ chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma na ahụmịhe pụrụ iche.
E nwere ọganihu dị iche iche na njikwa nke ijikwa ikike Amazon gị. Otú ọ dị, ha nile na-agbada n'otu ụkpụrụ abụọ nke azụmahịa - oge na ego. Ịkwesiri iwepụtakwu oge na ịmepụta mgbasa ozi ahịa n'onwe gị. Mgbe ahụ ị na-eche ego ole i nwere ike ime na ndepụta Amazon kachasị mma. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị gbakọọ ego ole ị nwere ike ịlafu n'ihi oge ị na-atụba usoro atụmatụ kachasị mma maka azụmahịa gị Amazon.Enweghi etiti oge n'etiti oge na ego ma a na - enweta mmepe ahia. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji kpebisie ike ịdabere na ndị ọkachamara ahịa ahịa nke Amazon iji chekwaa oge na ego ha.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle isi ihe mere ọ ka mma iji kwado ndị ọkachamara Amazon ahịa karịa ijikwa azụmahịa gị na nke gị.
Isi ihe mere ị ga - eji gbazigharịa ndị ahịa Amazon
Site n'ịkwado ọkachamara ahịa Amazon, ị nwere ike ịkwụsị usoro mmụta
E nwere ọtụtụ usoro, ndebiri, na onye ọ bụla nke na - ndị ọkachamara ọkachamara na-ahụ maka enyemaka na-enyere ndị ahịa aka ịkwalite na ebuli ngwaahịa ha na Amazon. Enweghi ike ikwu ọtụtụ n'ime usoro ndị a tupu mgbe ahụ. Ya mere, ị gaghị enwe ike ịchọta ozi ọ bụla gbasara ya na Ịntanetị. Ọtụtụ n'ime ụzọ ndị a na-eme naanị otu ugboro n'oge usoro nyochacha, ma ọ bụ na ikpe mgbe ihe na-agahie. Ịkwesighi ịbanye na nkọwa nke ụzọ ọ bụla dịka a ga-emere gị ihe niile. Ndị ahịa gị na-ere ahịa ga-achịkwa nri ehihie niile ma dozie nsogbu ọ bụla dị adị dị ka ogo ntụsara ahụ, nsogbu ndị ahịa, mmezu, na na. Ha ga eji ohere niile nwere ike dozie ma dozie nsogbu dị na nwa.
Ndị ọkachamara ahịa ahịa Amazon ga - enye gị ohere ịnweta ọrụ kachasị mma na ngwá ọrụ dị irè
Ndị ahịa na-ejikwa ihe ndekọ nke Amazon, ha anaghị enwe oge na nyocha na ịzụ ahịa dị ka ha na- na-etinye aka na ihe omume niile kwa ụbọchị dịka nhazi ọrụ, ọrụ nkwado ndị ahịa na ijikwa ihe ndị ọzọ. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka ịnọ ruo ụbọchị ọ bụla ahịa novelties na ụlọ ọrụ na mmepe. Ya mere, ị ga-achọ onye na-arụ ọrụ nlekota oru Amazon mgbe niile ma mara ihe niile ọchụchọ na PPC algorithm peculiarities, ọrụ ikpo okwu na na. Onye ahịa ọkachamara nke Amazon ga - enyere gị aka ịmekọrịta azụmahịa gị na ụlọ ọrụ azụmahịa ndị a nile ma chebe azụmahịa gị site na ihe ọ bụla furu efu na ogo tụlee. Ọzọkwa, ọkachamara Amazon nwere ike ịchọpụta otú mgbanwe ndị a nwere ike isi nyere azụmahịa gị aka.
Onye ahịa ahịa Amazon ga - enyere gị aka ijikwa akaụntụ azụmahịa gị Amazon wee nye gị oge iji lekwasị anya na isi azụmahịa na arụpụta ụlọ ọrụ
karịsịa ndị buru ibu, jiri Amazon dị ka ahịa ndị ọzọ maka ire ere ha. Ya mere, ha na-etinye uche na mmepụta ihe na ebe ndị ahịa kachasị dị ka ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị. O siri ike ijikwa ma zụlite ọtụtụ ahịa, nkesa, na ịzụ ahịa ahịa n'otu oge. Otú ọ dị, ị ga-achọrịrịrịrị na ijiri azụmahịa na Amazon chọrọ oge na nkwụnye ego, mgbe ụfọdụ ọbụlagodi na ị ga-etinye ego mgbe ị na-agba ọsọ azụmahịa gị.
Ụlọ ọrụ ndị na-aga nke ọma anaghị adabere na laurels mgbe a bịara n'ịzụ ahịa. E nwere mgbe ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ iji gbalịa, ụfọdụ ọganihu ọhụrụ iji mezuo, ụfọdụ nsụgharị ọhụrụ iji malite, na usoro iji tụlee. Ọganihu ndị a na-akwụ ụgwọ apụghị ọbụna ịkwụsịtụ oge n'ihi na ọ nwere ike iduga ego na efunahụ. Ha na-aga n'ihu ịchọta ụzọ ọhụụ iji kpoo ego na ịbawanye uru. Ọganihu azụmahịa bụ ụzọ kachasị dị irè isi kwụnye ụgwọ ma kwado ndị ahịa ndị ọzọ. Ya mere, ndị ahịa na-ahụ anya kwesịrị itinye oge na ihe onwunwe ha n'ụzọ amamihe.
Ikwesiri itinyekwu oge n'inwe ahia ahia, na mmepe ngwaahịa karia na ngwa a na-agbasi mgba ma na-aguta usoro ohuru Amazon.Iji ndị ọkachamara ahịa ahịa Amazon, ị nwere ike itinye uche na ihe ndị bụ isi ma dị mkpa, ebe ndị ọkachamara ga-ejikwa ihe ndị ọzọ.
N'akụkụ ọnụ, ihe niile m kwuru n'elu, enwere m ike ịsị na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ na ọ ga-akwụ ụgwọ iji ụgwọ Amazon ọkachamara, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa gị n'ọtụtụ ahịa. Ma ị ga-emeziwanye ntanetị Amazon gị ma ọ bụ ịhazi mkpọsa mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ, ị ga-enwetakwu ihe site na isoro ndị ọkachamara ahụmahụ, karịa ime ya onwe gị. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ịhapụ oge iji zụlite azụmahịa gị na mmelite Source .